« TACSI GEERIDA MARXUUM CABDILAAHI OOMAAR CAWAALE.
Dadaalka Daahir Waa Danteena By :-Axmed Cabdillaahi Fartaag.
Waxaa maal mahan jira socdaal uu madaxwayne Daahir Riyaale Kaahin
kawado gobolada Soomaaliland kuna xog waraysanayo baahida bulshada
ee taala iyo wixii ay ubaahanyiin sidii wax loogu qabanlahaa, hadii ay tahay heer dagmo ilaa heer gobol, kana bilaabay gobolka saaxil iyo dagmooyiinkiisa. Madaxwaynuhu wuxuu la shiray odayaasha dhaqanka, wax garadka, culimo awdiinka, dhalinyarada, ururada bulshada iyo maamulka gobolka jooga.
Gobalkaas madaxwaynuhu waxa uu u sii dhaafay gobolka togdheer, halkaas oo uu kula kulmi doono bulsho wayn kale oo ka kooban intaa aynu kor ku soo sheegnay. Hadaba waxa dadku iswaydiinayaan waa sidee dareenka bulshadu; maxay se u arkaan; maxaa se ka soo bixi doona; jawaabtu waxay tahay sidan:
Horta waa ILLAAHAY mahadii (SWT) in aynu aragno madaxwaynaheenii Daahir Riyaale oo dhex qaadaya umaddiisii, la shiraya, la tashanaya aaraa iyo fikradona is waydaar sanayaan. Runtiina way yartahay in la arko madaxwayne African ah oo tuulo tuulo u gaadha umadiisa iyo dalkiisaba. Umada somaliland meelkasta oo ay joogaan, ayaa sida cad ku diirsaday markay arkeen madaxwaynahoodii oo umadiisii si kafool kafool ah ula arinsanay, waana wax lagu faano.
Hadaba waxaan madaxwaynaha u soo jeedinayaa arimahan soo socda:-
1. In umadu ka sugayso, in uu fuliyo balanqaadyadooda uu la galay, si aanay taasu meesha uga saarto dareenka ah in madaxwaynuhu uu ka soo baxo uun gurigiisa markuu doorasho doonaayo.
2. In aanay booqashooyinkanu noqon markii ugu horaysay ama ugu dambaysay, se uu sii wado hadii uu ku guulaysto doorashada.
3. In baahida ugu wayni waxay taalaa caasimada lafteeda oo waa camal la’aan iyo biyo la’aane taas uu madaxwaynuhu xooga saaro sidii uu deg deg wax uga qaban lahaa.
Hadii madaxwaynuhu fuliyo wax ka qabashada baahiyaha kala duwan ee haya umadiisa, waxa hubaal ah in uu safarkiisan iyo mid kaloo kasta oo kaleba uu noqon doono mid midho dhaliya oo lagu diirsado.
By; Axmed Cabdillaahi Fartaag.
This entry was posted on June 8, 2009 at 5:35 am and is filed under 1.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.